ဘာအချက်တွေက ကောင်းမွန်သော စပီကာတစ်စုံ ဖြစ်စေသလဲ? | MT Electronics
Facts need to know Frequency Peavey Speakers
Audio ရဲ့ သိသင့်တဲ့အမှန်တရားများရှိတဲ့ စကြဝဠာ ကြီးကို ရှာဖွေဖို့ ရာ တစ်စုံထက်ပိုသော စပီကာအစုံများစွာကို နားထောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ တစ်ချို့ စပီကာများသည် အခြားသော စပီကာများထက် အသံထွက်ပိုကောင်းကြပါသည်။
စပီကာ တစ်စုံဧ။် အသံအရည်အသွေးသည် များစွာသော တီဆောက်ဖွဲ့ စည်းပါဝင်မှုများ (ထုတ်လုပ်သော ကုန်ကြမ်း / ဒီဇီုင်း / လုပ်ဆောင်ပုံလုပ်ဆောင်နည်းစနစ် များ အစရှိသည်) တို့ ဧ။် ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အသံထွက်အရမ်းကောင်းသော စပီကာတစ်စုံ ရဖို့ ရာ အလွန်ရှုပ်ထွေးနက်နဲ လှပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အသံသည် သိပ္ပံ နှင့် အနုပညာ ၂ မျိုး ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
Audio နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့အမှန်တရားများရှိတဲ့ စကြဝဠာ ကြီး ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်
(1) Frequency Response (ကြိမ်နှုန်း တုံ့ ပြန်ချက်)
အလွန်ကောင်းမွန်သော စပီကာသည် အသံကို တိကျပြန်လည် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် အသံကို သူဧ။်နဂိုအသံ မှ များစွာသွေဖယ်၍ အခြားသောအသံဧ။် အရောင်အသွေး (color) မှ ထပ်မံမရောစပ်မပြောင်းလဲစေတတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပြည့်စုံသော စပီကာဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး သို့ သော် အကောင်းဆုံး စပီကာသည် အသံထွက်အမှန်ကို အနီးစပ်ဆုံး တူညီစွာ ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
သီအိုရီအရ သင်ဧ။် စပီကာမှ ထုတ်လုပ်သော အသံဧ။် သစ္စာရှိမှုကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ Frequency resonse “ကြိမ်နှုန်း တုံ့ ပြန်ချက်” ပုံစံ charts များသည် စပီကာဧ။် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသော တုန်နှုန်းများကို ဖော်ညွှန်းသည်။ လူတို့ ဧ။် နားဖြင့် အကြားနိုင်ဆုံး Full range ကြိမ်နှုန်းများ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သော စပီကာ တစ်စုံ သင်လိုအပ်ပါသလား? Frequency resonse “ကြိမ်နှုန်း တုံ့ ပြန်ချက်” သည်လဲ အကောင်းဆုံး စပီကာဖြစ်စေသော အချက်မဟုတ်ပါ။ စပီကာမှ ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်သော အသံအရောင်အသွေး Color ကို နားလည်ဖို့ ရာ စပီကာဧ။် output ပြောင်းလဲခြင်းများသည်လဲ range ကဲ့သို့ အရေးကြီးပါသည်။
စပီကာတိုင်းသည် တစ်ချို့ သော ကြိမ်နှုန်းများကို တခြားစပီကာများထက် ပို၍ တိုးစေ (သို့ ) ကျယ်လောင်စွာ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ သင့်ဧ။်အဓိက ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင်သည် ကြိမ်နှုန်းများကြား အသံကျယ်မှုတွင် ပြောင်းလဲမှု အနည်းဆုံး ဖြင့် တိကျသော ပင်ကိုယ် အသံကို စပီကာမှ ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အသံအရည်အသွေးကောင်းသော စပီကာများဧ။် သရုပ်ဖော် ဇယား (requency response chart) တွင် Frequency response မျဉ်းကြောင်းသည် အတက်အကျ အရမ်းမများဘဲ ညီညာနိုင်သလောက် ညီညာနေရပါမည်။
Audio Source နှင့် အသံချဲ့ စက်များမှ ပေးလိုက်သော ပြီးပြည့်စုံသော signal သည် စပီကာဧ။် တည်ဆောက်ထားမှုပုံစံများကြောင့် သတ်မှတ်ပုံဖော်ထားသော frequency response ညီညာမှုများမှ ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် အိမ်ခွံရိုက် ပြုလုပ်အသုံးပြုနေသော စပီကာတွင် Frequency response မှန်ကန်စွာထွက်စေရန် တိုင်းတာ တွက်ချက် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်မထားလျှင် ထွက်လာသော အသံများသည် သဘာဝကျမည်မဟုတ်ပါ။ သို့ သော် Mixer မှ EQ ဖြင့်ပြင်၍ရသည်ဟု သင်စောတက တက်နိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ထိုသို့ အရည်အသွေးမကောင်းသော စပီကာအား Mixer ဧ။် EQ ဖြင့် color များကို အလွန်အမင်း ပြင်လိုက်လျှင် Live တွင် အသံအဆင်ပြေကောင်းပြေသွားနိုင်ပါသော်လည်း Recording အား ပြန်လည်နားထောင်ကြည့်လျှင် ကြောက်စရာကောင်းသော အသံထွက်ဖြစ်နေပါမည်
(2) Materials (ကုန်ကြမ်း)
စပီကာဧ။် လုပ်နိုင်စွမ်းအားဖော်ပြချက်များ (Specifications) ကို ယှဉ်ကြည့်သောအခါ driver တွင် ပါဝင်သော စပီကာ စက္ကူ (cones) အားလုပ်ထားသော ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားများစွာရှိသည်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။ ထိုကုန်ကြမ်းများတွင် စက္ကူ / အလူမီနီယမ် / polypropelene / ceramic / glass fiber polymer ကဲ့သို့ သော ကုန်ကြမ်းများ တို့ ပါဝင်ပါသည်။ တူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည့် လေကို တွန်းထုတ်ပြီး အသံလှိုင်းဖြစ်ဖို့ ရာ ထိုကဲ့သို့ ကုန်ကြမ်းများကွာခြားမှုများ ရှိနေပါသလဲ?
လေကို တွန်းထုတ်ဖို့ စပီကာ စက္ကူ (cones) သည် piston ကဲ့သို့ ရှေ့ တိုး နောက်ဆုတ် ပြုလုပ်ရပါသည်။ တစ်ချို့ ကြိမ်နှုန်းများတွင့် စပီကာ စက္ကူ (cones) သည် ကွေးသွားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကွေးသွားပါက အသံကို နှောက်ယှက်မှု (distors) ပေးပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် မကွေးနိုင်သော့ စပီကာ စက္ကူ (cones) အမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်အသုံးပြုကြပြီး ကွေးခြင်း (Flexing) ကို တက်နိုင်သမျှ လျော့နည်းစေရန် ပြုလုပ်ပါသည်။
စပီကာ ဒီဇီုင်းထုတ်လုပ်သူများတွင် ကွေးခြင်း (Flexing) ကို တက်နိုင်သမျှ လျော့နည်းစေရန် ပြုလုပ်ပုံတွေးခေါ်ယူဆချက်များ မတူညီကြပါ။ ဥပမာ - PSB စပီကာများထုတ်လုပ်သူ အင်ဂျင်နီယာ ချုပ် Paul Barton သည် သူ့ စပီကာ စက္ကူများကို ကွေးခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော ရွှံ့ စေးစိမ်ထားသည့် cones အမျိုးအစားများကို အသုံးပြုပါသည်။့ စပီကာ စက္ကူ (cones) သည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကြောင့် အသံအရည်အသွေးကွာခြားမှုကို ဖြစ်စေသော ဥပမာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် အသုံးပြုသော ကော်မှ အစ ဝါယာကြိုးများအထိ အားလုံးသော ကုန်ကြမ်းအစိတ်အပိုင်းတို့ သည်လဲ စပီကာဧ။် အသံထွက်ပေါ်တွင် ပျမ်းမျှ ပြောင်းလဲမှုရှိစေပါသည်။ ထို့ ကြောင့် စပီကာထုတ်လုပ်သူများသည် ကုန်ကြမ်းအားလုံးကို အကောင်းဆုံး အသံထွက်ရရှိစေရန်အတွက် စပီကာ ကို တည်ဆောက်ရာတွင် အထူးဂရုစိုက် ရွေးချယ်ကြရပါသည်။
(3) Sound designs
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဧ။်အရေးပါမှု သည်လဲ အသံထွက်ကောင်းရဖို့ စပီကာတည်ဆောက်ခြင်းဧ။် အရေးကြီးသော တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကောင်းများရရှိပြီးလျှင် ထိုပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ခြင်းများသည် လဲ အသံကောင်းမွန်မှုတွင် အရေးပါသည်။ Paul Barton က ဟင်းချက်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြင့် ဤကဲ့သို့ ဥပမာ ပေးသည်။ မီးဖိုချောင်တစ်ခုထဲတွင် စားဖိုမှူးများအား တူညီသော ဟင်းချက်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများပေး၍ ချက်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ထို့ နောက် တစ်ချို့ စားဖိုမှူးများသည် အခြာေးသာ စားဖိုမှူးများချက်တာထက် ပို၍ အရသာ ကောင်းမွန်နေတာကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ဆိုပြီး ဖြစ်ပါသည်။
စပီကာ drivers များ ထည့်သွင်းမည့် အိမ်ခွံတစ်ခုကို ယူလိုက်ပါ။ သင်လိုအပ်တာသည် အသံထွက်ကောင်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထို အိမ်ခွံဒီဇိုင်းကို သေချာစွာ တွက်ချက် မပြုလုပ်လျှင် အသံဧ။် အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်မှုကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခွံအလွန်ကျယ်သွားလျှင် အိမ်ခွံအတွင်း လှိုင်သံ (echo) သံများ အကြိမ်ရေများစွာ ထပ်၍ Driver မှ လာသော အသံလှိုင်း (sound waves) ကို နှောက်ယှက်မည့် Cross noise ဖြစ်စေပြီး အသံအရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှု ကို ထိခိုက်စေပါမည်။ ဒါ့အပြင် အိမ်ခွံအစိတ်အပိုင်းများသေချာတိကျ စွာ တင်းကျပ် တင်ဆင်ခြင်းမပြုလျှင် အသံနှောက်ယှက်မှု (distortion) ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
(4) Crossover Circuit (Network ကဒ်)
Crossover Circuit (Network ကဒ်) သည်လဲ အသံထွက်ကောင်းသော စပီကာ ရရှိဖို့ ရန်အတွက် အဓိက ကျသော နောက်ထပ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Driver တစ်ခုထက်ပိုသော စပီကာတွင် Crossover Circuit (Network ကဒ်) သည် ဘယ် driver မှ ဘယ် frequency ကို ထုတ်ပေးရမလဲ ဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဥပမာ - treble (အသံမြင့်) ကို ထုတ်ပေးမည့်ှကြိမ်နှုန်းမြင့် (high frequencies) များကို tweeter သို့ ပို့ ပေးပြီး Bass (တုန်ခါမှု) ကို ထုတ်ပေးမည့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့် (low frequencies) များကို woofer သို့ ပို့ ပေးပါသည်။ Crossover Circuit (Network ကဒ်) ကို သံစုံတီးဝိုင်း Orchestra ဧ။် ပါဝင်တီးခတ်သူများအား ဦးဆောင်ညွှန်ကြားသူကဲ့သို့ စပီကာတစ်လုံး
အတွင်းတွင် လုပ်ဆောင်သူဧ။် တင်စားလို့ ရပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Crossover Circuit (Network ကဒ်) မတူလျှင် တီးခတ်သူများတူသော်လည်း ထွက်လာသော တေးဂီသသံ ကွားခြားမှု ရှိနိုင်ပါမည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သုံးထားသော drivers များတူသော်လည်း Crossover Circuit (Network ကဒ်) မတူပါက ထိုစပီကာ တို့ ဧ။် အသံထွက် တူမည်မဟုတ်ပါ။
(5) Drivers (Woofers and Tweeters)
စပီကာဧ။် Drivers များ (woofer နှင့် tweeter) များတွင် တစ်ချို့ အမျိုးအစားများသည် မတူညီသော ကြိမ်းနှုန်း (Frequencies) များကို ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း တစ်ချို့ သော Drivers များ (woofer နှင့် tweeter) များ သည် မတူညီသော ကြိမ်းနှုန်း (Frequencies) များကို ကောင်းမွန်စွာ မထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ အပြင် တစ်ချို့ သော Drivers များ (woofer နှင့် tweeter) များ သည် မတူညီသော ကြိမ်းနှုန်း (Frequencies) များကို ကောင်းမွန်စွာ လုံးဝ မထုတ်ပေးနိုင်ပါသော အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။
ကောင်းမွန်သော အသံထွက် ပေးနိုင်သည့် စပီကာ ဒီဇိုင်းသည် စပီကာဧ။် Drivers များ (woofer နှင့် tweeter) များ နှင့် crossover (Network ကဒ်) တို့ နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ပြီး driver တစ်ခုချင်းစီဧ။် ကြိမ်နှုန်း (Frequencies) များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တိကျစွာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းပေါ်တွင် အာရုံစိုက်အထူးပြုစေပါသည်။
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ရပ်တည်နေသည့် အမေရိကန် အမှတ်တံဆိပ် Peavey စပီကာများကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ ...